HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulCrazy Projects Pro 320 Billion Lira
13 / 01 / 2020 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Airports, Rohibe, Highway, Headline, Faritra Marmara, TORKIA
Ny vidin'ny tetikasa adala dia amina miliara
Ny 'tetik'asa adala' an'ny filoham-pirenena Tayyip Erdoğan araka ny voafaritry ny fandaharam-potoanan'ny fantsona ao Istanbul raha ny herin'ny Fatih Project tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny tetezana Yavuz Sultan Selim, ny tetezana Osmangazi, ny seranam-piaramanidina faha-3 sy ny hopitalin'ny tanàna. Mitentina 5 miliara ny totalin'ny sandan'ny vola 320 vola.
Oğuz Gündoğdu avy any BirgünManombatombana ireo tetik'asa 5 notanterahina tato anatin'ny taona vitsivitsy taorian'ny fandaharam-potoana Kanal Istanbul. Ireo tetik'asa nampidirina miaraka amin'ny anarana toy ny 'tetikasa amin'ny taonjato »dia voatanisa manaraka izao:
Fatih Project dia natomboka tamin'ny taona 2010 ary nandany 8 miliara 500 tapitrisa kilao. Raha ny voalazan'ilay drafitra dia ho nampianarina miaraka amin'ireo takelaka ireo mpianatra ao amin'ny firenena ao anatin'ny 4 taona. Tetikasa masiaka "tetikasa tamin'ny taonjato", nampiditra ny tetikasa izy dia tonga voalohany amin'ny fandaharam-potoana miaraka amin'ny fandaniana tsy ara-dalàna. Avy eo, tamin'ny volana septambra 2013 dia nofoanana i Birol Ekici, lefitry ny lefitry ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena. Ny tetikasa, izay tokony ho vita amin'ny 2014, dia nitarina tamin'ny taona 2015 ka hatramin'ny 2017. Tamin'ny 8 Janoary 2020, dia takatra fa ny lisitry ny solosaina dia natao tao anaty boaty tao Diyarbakır.
Mitentina 1974 tapitrisa dolara ny tetezana Bosporus, izay nosokafana tamin'ny 21 ary ny $ 1988 tapitrisa ny tetezana Fatih Sultan Mehmet, izay nosokafana tamin'ny taona 125 dia mitentina 3 tapitrisa dolara, raha ny 3 pirinty kosa no namboarina tamin'ny 658 miliara. Na izany aza, ny antsasaky ny anjaran'ny tetezana dia nafindra tany amin'ny Sinoa tamin'ny 135 tapitrisa Euros. 'Ny poketra ho an'ny daholobe dia tsy hivoaka avy amin'ny penina tokana' antsoina hoe tetikasa taorian'ny fisokafan'ny volan'ny tetibola tsy ela taorian'ny nahatakarana ny fisokafana. Araka ny valin-kafatry ny Tale jeneraly foibe amin'ny làlambe, Honorary Adıgüzel, CHP, fiara 3 tapitrisa tapitrisa no nandalo tamin'ny tetezana faha-2016, fiara 2019 isan'andro, manomboka amin'ny volana septambra 41 ka hatramin'ny Jona 805. Araka izany, na dia ny ampahatelon'ny fanomezan'ny fiara nomena nandritra ny 3 taona dia tsy ho tratra. Hatramin'ny niakaran'ny vidin'ny tetezana hatramin'ny nanokafana ny 1,8 tapitrisa kilao isan'andro.
Nisokatra ny seranam-piaramanidina fahatelo ny 29 Oktobra 2019 nahatonga ny fanakatonana ny seranam-piaramanidina Atatürk. Nirohotra nankany amin'ny seranam-piaramanidina Ataturk hatramin'ny 3 janoary 3 ity fanidiana ity mba hampandehanana ny zon'ny TAV 2021 tapitrisa Euros dia azo ny onitra. Hamdi Topçu, filohan'ny Turkish Airlines teo anelanelan'ny taona 389 ka hatramin'ny 2010, dia nilaza tao amin'ny bokiny 'From Local to Global', dia ho ampy raha tsy amin'ny 2015 raha misy làlan-dàlambe hafa atao ao amin'ny seranam-piaramanidina Atatürk.
Osmangazi Bridge ho an'ny orinasam-pifandraisana no nanome antoka ny fiovan'ny fiara ho takalon'ny vola dolara. Ny tale jeneralin'ny Otoyol AS Bülent Esendal, izay mitantana ny tetibola, izay mitombo 2019 isan-jato rehefa niditra tamin'ny taona 50 dia nilaza fa tsy afaka manova ny tari-dalana izy ireo noho ny tsy fitovian'ny tahan'ny dolara. Tamin'ity taona 2018 ity, ny isan'ny tetezana ho an'ny fiara dia 72 kilao, fa io vola io dia nitombo hatramin'ny 2019 kilao tamin'ny 103 ary 2020 pounds tamin'ny 118. Ho an'ny 2018 irery, ny vidin'ny Osmangazi sy Yavuz Sultan Selim Bridges amin'ny tetibola dia 1,8 miliara TL araka ny fampahalalana nomen'ny Minisitry ny fitaterana Cahit Turhan. Manodidina ny 2018 eo ho eo izao ny vola alainan'ny filoham-pirenena 2,5 ity vola ity.
Natolotra ho an'ny besinimaro tamin'ny taona 2017 ny tetikasan'ny Hopitaly Hopitaly. Ny filoham-pirenena Erdoğan dia nitady ny hopitaly ao an-tanàna tamin'ny filazany, alim Ny nofinofiko nandritra ny 14 taona dia ny tetikasa tiako. ” Tamin'ny taona 2018 sy 2019, ny hopitaly ao an-tanàna, izay nosokafana tsirairay avy, dia naparitaky ny tetibola ao anatin'ny fotoana fohy toy ny tetikasa adala hafa. Tamin'ny faran'ny taona 2019 dia nihoatra ny 25 miliara dolara ny vidin'ny 142 taonan'ny hopitaly eo amin'ny tanàna. Be dia be io vola io ho entina mamatsy vola ny fananganana hopitaly 800. Fanakianana ny herin-tsofina manindrona sofina dia «hoy ianao» naratra, »hoy izy. Ny minisitry ny fahasalamana Fahrettin Koca dia nanao fanambaràna momba ireo tsikera ireo tamin'ny 26 Novambra 2019: “Araka ny hevitray, ny hopitaly dia tsy ivondron'antoka ara-barotra fa hofan-trano ataontsika, tsy tokony handoa azy ve isika? Açıklama
envisaging ny fanomezana ny rano avy any Torkia sy Avaratra Sipra "tamin'ny taonjato tetikasa" antsoina hoe ny fanokafana ny tetikasa natao tamin'ny 17 Oktobra, 2015. Ny filoha Recep Tayyip Erdogan sy ny praiminisitra Ahmet Davutoglu dia nanatrika ny lanonana tao Mersin. Davutoğlu dia namariparitra ilay tetikasa ho eser asa eran'izao tontolo izao, ary hoy izy, uz Manangana tetezana rano mahafinaritra izahay eran'izao tontolo izao. Tanindrazana miaraka amin'ny zava-drehetra izany, ary teratany amin'ny zava-drehetra .. Natao teo amin'ny fifantohan'ny dinika dia nipoaka ny tetikasa, vantany vao 5 taona. 5 kilaometatra miala ny morontsiraka Anamur no mipoaka ny fantsona nikoriana. Manodidina ny fantsona lalina be 250 metatra no hita avy amin'ny ranomasina. Misy rano mikoriana avy amin'ny sodina. Mitentina 1,6 miliara dolara ny tetikasa.
Ny sandan'ny fampiasam-bola: 320 miliara kilao
Vidin'ny fampiasam-bola: 8,5 miliara kilao
Tetezana 2-Yavuz Sultan Selim:
Vidin'ny fampiasam-bola: 3,5 lavitrisa dolara
Vola ankehitriny: 23,5 miliara kilao
3- Tetezana Osmangazi:
Vidin'ny fampiasam-bola: 2,5 miliara
Vola ankehitriny: 17 miliara kilao
4- 3. seranam-piaramanidina:
Vola fampiasam-bola: 35 miliara dolara
Vola ankehitriny: 206,5 miliara kilao
Hopitaly 5- 20:
Vola fampiasam-bola: 11 miliara dolara
Vola ankehitriny: 64 miliara kilao
Ny lany amin'ny tetikasa adaladala dia hilatsaka amin'ny fahamatorana
1 Saran'ny tetibola Osmangazi amin'ny Tahirim-bola 1.3 Billion Lira
Ny taona 2018 dia ny taona ho an'ny tetikasa Crazy
Tsy tetikasa adaladala izany, fa fitrohana loza.
Saran'ny tetikasa Başkentray 600 Million Lira
Ny vidin'ny isan'andro isan'andro eo amin'ny tetezan'i Osmangazi mankany amin'ny fanjakana dia 3 tapitrisa pounds
Ny bus 320 tram 4 dia niasa tamin'izany fotoana izany, namakivaky ireo boky manerantany
Fanamarihana Tender: Fidirana, famoahana ny lalana vita amin'ny mivaingana 320.000.pcs eo anelanelan'i Polatlı sy Sincan…
320 fotoana fanampiny amin'ny Metrobus | Istanbul
Tavoahangy arivo taonina no natsipy tao amin'ny tehina
Ny vidin'ny Eurasia Tunnel dia $ 10 miliara dolara
3. Ny saran'ny seranan-tseraseran'ny seranam-piaramanidina dia hahatratra 5 miliara TL
Saran'ny tetikasa fiarandalamby haingana ao Ankara-Izmir 4.2 miliara TL
Ny vidin'ny tetik'asa adala
Ny vidin'ny seranam-piaramanidina Istanbul
Ny tetik'asa taonjato
Ny vidin'ny tetezana Osmangazi
Ny vidin'ny tetezana Yavuz Sultan Selim